Facebook account ကို Confirm code မတောင်းအောင် ဖွင့်နည်း ~ ကြယ်စင်ဟိန်း(Mobile Special Service)
EMMC Flash Chip (Embedded Multi Media Card ,Essentiallyamicro sd card that is soldered to the board) (Boot +Rom 1+Rom2 & System...
C8815 အတွက် Tool တွေအကုန်လုံးကိုစုစည်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ..Network Unlock Fix နှင့် Step2Fail Error များအတွက်၊နောက်ပြီးတော့ C8815 One Key To...
Huawei C8815(C 800)တစ်ကဒ်သုံး
huawei ကထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ G610 နဲ့ တစ်ပုံစံတည်းတူတဲ့ C8815 ပါခင်ဗျာ....
Shan Myanmar Game for Android
Android မှာပေါ်တဲ့ Safe Mode ကိုဖျောက်မယ်
Phone မှာ software/Game တွေအထည့်များပြီး Force Close တွေပေါ်၊ Uninstall လုပ်ဖို့ကလဲ ဖုန်းက ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်၊ ဟိုဟာနှိပ်လဲမရ ဒီဟာနှိ...
C8813 တွေမှာ CWM Recovery ကို English/Chinease နှစ်ဘာသာဖြင့် Touchပါသုံးလို့ရတဲ့ Cwm recovery img လေးပါ...
Huawei Y511-U00 အတွက် CWM-recovery ဖုန်းကို Debugging ဖွင့် ပြီး ချိတ် လိုက်ပါ ။ Driver သိပြီ ဆို ရင် Y511 recovery.exe ကို ဖွင့်ြ...
C8813D STEP2 update fail error
Huawei C8813D C8813D တွေလည်း system update ပေးတဲ့အခါ လုပ်မိပြီး Sim Card မဖတ်တော့တာတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။သိပြီးသားလူတွေကတော့ သိပြီးမှာပါ ...
C8813D Network လိုင်းပျောက်ခြင်း
C 8813D တွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ Network လိုင်းပျောက်ခြင်းတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလေးပါခင်ဗျာ User တွေ အတွက်ပေါ့ နော် Pro တွေအတွက်တော့ မဟ...
C8815 Step2Fail Error ရှင်းမယ်
C8815 Step2Fail Error ရှင်းမယ့် Tool လေးပါခင်ဗျာ... ကျေးဇူးပြုပြီး အဆင်ပြေမပြေမန့်ခဲ့ပါဦးနော် အနော်တော့ အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာ အဆင်မပြေဘူးဆ...
ကြယ်စင်ဟိန်း(Mobile Special Service)မှ ကြိုဆိုပါတယ်
Download လုပ်မည့်သူများ မဖြစ်မနေ ဖတ်ပေးပါ။ http://...
Korea RingTone Apk
Android အတွက် မြန်မာ Offline Maps ပါတဲ့ Applicatio...
ကိုယ့်ဖုန်း အင်တာနက် ဘယ်လောက်မြန်လဲသိချင်ရင်(Full ...
Post Tool 3D
Automatic Wallpaper Changer-3
Riptide GP2(Unlimited Money)
VZO Chat Android Apk
ှSamsung Galaxy Gio S5560 အတွက် free games
Every Thing Home(Beta)
နှေးကွေးနေတဲ့ connection နဲ့တောင် Facebook ကို အဆင...
ရိုးရှင်းစွာ ခြင်တွေကို နှိမ်နင်းနည်း
TrueSkae v1.00 Apk Game 24MB
Android ဖုန်းတွေမှာ Facebook ခဏခဏLogout ဖြစ်သွားတာ...
Facebook account ကို Confirm code မတောင်းအောင် ဖွင...
Cyber Link Wave Editor Portable exe
မြန်မာ web လမ်းညွှန် Application(For စက်ရုံ)
စက္ကူလေယဉ်ခေါက်နည်းလေးပါ ခင်ဗျာ Android
မစားသင့်သောအစားအစာများကို ဖော်ပြပေးသော Android Apk...
Huawei C8825 internet setting မရတဲ့သူတွေအတွက်
သင့်Android လေးက Battery ခဏခဏအားကျတတ်ရင်ဒါလေးသုံး
Android ရဲ့ဖုန်းလိုင်းဆွဲအား၊Internet လိုင်းဆွဲအား...
Phone ရဲ့ Internet Speed ကိုမြှင့်မယ်...
Android ဖုန်းရဲ့ အင်တာနက် Speed ကိုမြန်စေမယ့် quic...
Internet Speed Meter 1.1.0 apk
Set CPU for Root Users v3.1.2 Apk 1.6MB
PlayStore Fix For Rooted Devices
Viber Free Call app ကိုအသုံးပြု၍ Andriod Screen
မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် လျှော...
Mobile ဖုန်းအတွက်Secret Code များ
ကိုကို ညီညီတို့အတွက် porn sex sound (သတိ မိန်းကလေး...
Root လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလည်း.....?ဘာကြောင့်Android ကို ...
Viber Myanmar Version
Shake To Charge For Android(ဖုန်းကိုလှုပ်ပြီး အားသွ...
You Tube Video များကိုမထစ်ဘဲကြည့်မယ်
No Root Huawei
Screenshot UX v.1.7.8 Apk
SCR Screen Recorder Pro_ root v0.7 beta Apk (323 k...
ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် တစ်သောင်းတန်ကဒ် ဖြည့်သွင်းလျှင်ကျ...
အရစ်ကျဖုန်းစာချုပ်များ ဆက်သွယ်ရေးရုံးများတွင် ထုတ်...
Android နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ကြယ်စင်ဟိန်း(Mobile Special Services)မှ Latest Android App နှင့် Game များကို တစ်နေရာထဲတွင် စုံလင်စွာ ရရှိနိုင်ရန်လည်းစုဆောင်းပေးထားပါသည်။
အခြေအနေအရ မစုံလင်ခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါလို့ ဒီနေရာကပဲ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ...လူကြီးမင်းတို့၏ အခက်အခဲများကိုလည်း minthweyint@gmail.com ကိုအပ်ခြင်းဖြင့်မေးမြန်းနိုင်သလို yehtet.al.al@gmail.com ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
Android Repairs များ
General News များ
Mobile Hardware များ
Mobile News များ
Root & Myanmar Font Installations များ
Android App များ (198) Android Game များ (42) Android Repairs များ (18) Android များ (27) Ebooks များ (2) General News များ (6) Mobile Hardware များ (6) Mobile News များ (37) Root & Myanmar Font Installations များ (21) ကဗျာ များ (24) နည်းလမ်း များ (129) အထွေထွေသတင်း များ (9)
Facebook account ကို Confirm code မတောင်းအောင် ဖွင့်နည်း
3:33 AM နည်းလမ်း များ No comments
တစ်ခါတည်း အကောင့်က လော့ကျသွားတာတွေ ကြားနေရပါတယ် ..
You Tube ကနေကြည့်လိုပါကသည်မှာသွားပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်....
လူဆိုတာ ကိုယ်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းကိုသိရမယ်...ဘာလုပ်ချင်လဲသိရမယ်..မသိတဲ့သူကတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့ အရူးတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်
Mobile ဖြင့်ပတ်သက်သော Software Error နှင့် Hardware Error များကို minthweyint@gmail.com & yehtet.al.al@gmail.com တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကြယ်စင်ဟိန်း(Mobile Special Services)
Copyright © ကြယ်စင်ဟိန်း(Mobile Special Service) | Powered by Blogger